कालीगण्डकी प्रसारण आयोजनाको सवस्टेशन निर्माण कार्य कहिले सकिन्छ ? | NepalDut
जेठ १२ गते २०७६
कालीगण्डकी प्रसारण आयोजनाको सवस्टेशन निर्माण कार्य कहिले सकिन्छ ?
पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ स्थित सूर्यबस्तीमा जारी कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाअन्तर्गतको सवस्टेशन निमार्र्णकार्य धमाधम भैरहेको छ ।
कालीगण्डकी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बडेरा सूर्यबस्ती ९न्यू बुटवल २२०÷१३२ केभी सवस्टेशन० आयोजनाको निमार्णकार्य पूरा हुन अझै करीब चार महीना मात्र लाग्ने आयोजनाले जनाएको हो । अहिलेसम्म करिव करीब ४५ प्रतिशत पूरा भएको छ ।
२२०÷१३२÷३३÷११ केभी सवस्टेशनमा पहिलो र दोस्रो चरण गरी तीन ट्रान्सफर्मर राखिने योजना रहेको कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाका प्रमुख चन्द्रकुमार घोषले जानकारी दिनुभयो ।
कालीगण्डकी प्रसारण लाइनअन्तर्गत म्याग्दीको दाना सवस्टेशन र कुश्मा तथा पश्चिम नवलपरासीको स्टेशन जोड्ने गरी सवस्टेशन निर्माण जारी छ । नेपाल सरकारले अघि बढाइरहेको सो कार्यका ठेकेदार कम्पनी भारतका श्री टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड रहेको छ ।
कुश्मा–न्यू बुटवल खण्डअन्तर्गत पर्वतको कुश्मादेखि बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै पश्चिम नवलपरासीको बडेरासम्म ८८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । न्यू बुटवलदेखि पश्चिमनवलपरासीको बर्दघाटसम्म २० किलोमिटर लामो अर्को खण्ड निर्माण गरिनेछ ।